Tontolo_iainana · Mey, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Mey, 2012
Jona 2022 5 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Mey, 2012
Peroa : Iquitos Taorian'ny Fandalovan’ ilay Tondradrano
Amerika Latina 29 Mey 2012
Fanadihadiana mikasika ny tondra-drano no nandrakotra ny faritra Amazon ao Peroa nandritra ny iray volana, nahatratra sy nihoatra ny teboka ambony indrindra teo amin'ny tantara..Amin'izao fotoana izao dia efa nihena izany . Ao anatin'ity lahatsoratra ity no izarànay ny lahatsary avy amin'ny mponina, sary ary fanadihadiana mikasika ilay tondra-drano.
Iran : ” ‘Ndeha Hiaro ny Farihin'I Urmia Amin'ny Ranomasontsika “
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Mey 2012
Tsy kivy mihitsy ireo mpanao fihetsiketsehana maro niady ho amin'ny fiarovana ny farihin'i Urmia ao Iran amin'ny fahasimbana maharitra mahazo ny tontolo iainana. Ao anatin'ny filaharana manerana ny faritr'i Azerbaijan ao Iran, miantso ny governemanta izy ireo mba hiaro ilay farihy izay iray amin'ireo rano masira lehibe indrindra manerana izao tontolo izao .
India: Fifandonana tao Tamil Nadu Noho Ny Fanoherana Ilay Orinasa Mpamokatra Nokleary
Azia Atsimo 20 Mey 2012
Nampitombo ny ahiahin’ny vahoaka ny fametrahana ny Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) (Tetikasa Nokleary Matanjaka), ao amin’ny distrikan’i Tirunelvel ao Tamil Nadu, ao India, izay eo am-panamboarana ankehitriny, satria mety hiteraka voka-dratsy tahaka ny fipoahan’ilay orinasa mpamokatra nokleary Fukushima ao Japana izany. Manahy ny mpikatroka fa rehefa misy horohoron-tany arahinà tsunami ao...
Bolivia: Fampandrosoana Misanda Ohatrinona? Fifandirana Momba Ny Lalana TIPNIS
Amerika Latina 11 Mey 2012
Mbola niteraka fifandirana sy hetsi-panoherana indray ny tetikasa fanamboaran-dalana ao Bolivia izay manavatsava ny Faritanin'ny vazimba teratany sady valan-java-boarim-pirenena Isiboro Sécure (TIPNIS amin'ny teny espaniola)
Armenia: Fandresen'ny Mpikatroka Miaro Ny Tontolo Iainana
Azia Afovoany sy Kaokazy 09 Mey 2012
Taorian'ny telo volana nisian'ny fihetsiketsehana sy sit-ins tsy ankiato nokarakarain'ireo mpikatroka ho amin'ny tolona hanavotana ny zaridainan'i Mashtots, nanome baiko ny hanesorana hatramin'ny fakany ny foto-drafitrasa efa tafaorina noho ny faharatsian'endriny ny filoha Armeniana, Serzh Sargsyan, antony iray tsy tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo mpitolona manohitra ny fananganana tsy ara-dalàna atao amin'ny iray...